Sọpụrụ 20 Lite: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Honor na-akwado iji chee nso Honor 20 nso, nke ụbọchị ngosi ya bụ onye ọrụ. Ndị a bụ ụdị abụọ dị elu nke akara ngosi China. Agbanyeghị na n'akụkụ ya, anyị nwere ụdị etiti dị elu, ihe bụ Honor 20 Lite. Ekwentị nwere ike ịmata na nso nso a na ahịa ndị China, ebe ọ na-ebupụta ya n'okpuru aha dị iche, na nke a Honor 20i, anyi ekwuola ya.
Ugbu a, ekwentị enweela ihe ngosi ya zuru ụwa ọnụ. Yabụ anyị nwere data niile na Honor 20 Lite a. N'ime ha ka anyị maraworị mgbe a ga-ewepụta ekwentị ọhụụ na Europe. Na mgbakwunye na ọnụahịa ọ ga-enwe na mbido ya.
Ekwentị China a bụ ngwaọrụ Ẹkot Huawei P30 Lite. N'ezie, anyị pụrụ ịhụ nke ahụ ha nwere ọtụtụ akụkụ na-emekọ ọnụ. Ma na imewe ma na nkọwa ya. N'ihi ya, a na-ewepụta ha dị ka nhọrọ abụọ dị mma n'etiti etiti na gam akporo.
1 Nkọwa Sọpụrụ 20 Lite
Nkọwa Sọpụrụ 20 Lite
Na ọkwa teknụzụ, ọ na-ahapụ anyị ụfọdụ nkọwa anyị nwere ike ịtụ anya na mpaghara a. E tinyewo nlebara anya na igwefoto dị na ekwentị ahụ, yana igwefoto azụ atọ. Nhazi ahụ na-agbaso ụdị ejiji nke oge a, ya na ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị mmiri mmiri. N'okwu a, ihe mmetụta mkpịsị aka dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ. Ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke Honor 20 Lite:
Nchekwa ime: 128 GB (Gbasaa ruo 512 GB na microSD)
Nkọwapụta agbanweghị site na ihe anyị hụrụ na Honor 20i. Agbanyeghi na nbido mba ụwa anyị hụrụ onwe anyị nwere otu ụdị na usoro nchekwa na RAM. Ọ bụ isi ihe dị iche na nke a, na akara ndị China na-ahapụ anyị na ngwaọrụ a. Ma ọ bụghị ya, enweghị mgbanwe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ihe atụ emere na China izu ole na ole gara aga. Ezigbo ekwentị maka nke a.
O doro anya na kamera bụ ihe dị mkpa na ekwentị. A na-eji igwefoto nwere okpukpu atọ na Honor 20 Lite a. Ekele ya, ọ ga-ekwe omume ịse foto dị ukwuu n'ụdị ọnọdụ niile, nke doro anya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma. Ọzọkwa, igwefoto ekwentị na-akwado AI. Anyị na-ahụ ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ na anyị nwekwara akpọchi ihu na ekwentị. Batrị ya bụ 3.400 mAh, na-ebu ọnụ ngwa ngwa, yana chaja 10W.
Nke a na-asọpụrụ 20 Lite na-eme ka ntinye ya site na France, ya mere, mba ndị gbara ya gburugburu bụ nke mbụ a ga-ebupute. Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na mmalite ya na ọkwa Europe Ọ ga-ewere ọnọdụ na Mee 6. Yabụ, anyị agaghị echere ogologo oge ịzụta ekwentị ọhụrụ a site na akara ndị China. Ọ bụ ezie na ekwesiri ikwenye ma ọ bụrụ na ọ bụ mmalite maka Europe niile ma ọ bụ naanị France.
Ekwentị weputara n'otu ụdị nke RAM na nchekwa, nke bụ 4/128 GB. Ọ bụ ezie na anyị nwere ọtụtụ agba dị na ekwentị. Ndị ọrụ ga - enwe ike ịhọrọ n’etiti acha anụnụ anụnụ, site n’etinye grajentị, na oji. Banyere ọnụ ahịa ya, site n'ihe a mataworị, ọnụahịa nke Honor 20 Lite a ga-abụ euro 299. Ọnụahịa dị ukwuu maka ụdị a.
Ọ na-abịa dị ka a ezi nhọrọ na nke a nke adịchaghị n'etiti-nso na gam akporo. Ya mere, anyị ga-ahụ ma ndị ahịa na-enweta ekwentị a n'ụzọ dị mma na mmalite ahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sọpụrụ 20 Lite: smartphone ọhụrụ ahụ
Chebe gị isi site na ọtụtụ ndị iro na Days Bygone: Defense & Strategy